Malunga nathi - Hebei Delin oomatshini Co., Ltd.
Bonelela ngesona Sisombululo siBalaseleyo
Amava eminyaka engama-30 kuPhando, uYilo, ukuThengisa kunye nokuThengisa-emva kweNkonzo yokubonelela ngeziSombululo ziphelele.
I-Hebei Delin Machinery Co., Ltd. yenye yeenkampani ezinkulu zokupompa ezikhethekileyo kwimveliso yeempompo ze-slurry e-China. Ibandakanya indawo engaphezulu kwama-40,000m2 emhlabeni nangaphezulu kwama-22,000 m2 kwisakhiwo. Iimveliso zisetyenziselwa ikakhulu ukumbiwa, isinyithi, ucwangciso lwesixeko, amandla, amalahle, ikhosi yomlambo, i-FGD, ipetroleum, imichiza, izinto zokwakha, njl. Ngaphandle kwemarike yasekhaya, iimveliso zethu zithengiswa kumazwe angama-50 nakwimimandla.
Inkampani isebenzise 'uLawulo loMgangatho lilonke' ngokungqongqo kwaye yamkelwe i-ISO9001, i-ISO14001 kunye nezatifikethi ze-ISO / T18001.
Inkampani ibambelela kumgaqo 'weQela lokuZiphatha, uMveliso oGqwesileyo, iNkonzo yeBrand' kunye nomgaqo 'woMgangatho wokuqala, uMthengi oPhezulu' ukwenzela ukubonelela abaThengi ngeemveliso ezigqwesileyo kunye nenkonzo eyonelisekileyo.
Inkampani isebenzisa isoftware yobunjineli ekhompyutheni ephambili kuyilo lweemveliso kunye netekhnoloji, eyenza indlela yethu kunye nenqanaba loyilo lufikelele kwinqanaba eliphezulu lehlabathi. Inkampani inesikhululo sokuvavanywa kokusebenza kwempompo yokuqala emhlabeni, kwaye amandla ayo ovavanyo anokufikelela kwi-13000m³ / h. Imveliso yonyaka yeemveliso zethu iiseti ezili-10000 okanye iitoni castings chrome ingxubevange eliphezulu. Iimveliso eziphambili luhlobo lwe-DH (R), i-DM (R), i-DV (R), i-DF (i-DHF), i-DG, i-DSC (R), njl. Ubukhulu: 25-1200mm, amandla: 5-30000m3 / h, iNtloko: 5-120m. Inkampani inokuvelisa izinto ezahlukeneyo kubandakanya iChromium emhlophe yentsimbi, iSuper High yeChromium Hypereutectic White Iron, iCarbon ephezulu yeChromium Alloy, iCarbon Steel, i-Stainless Steel, iDuplex Stainless, iDuctile Iron, iGrey Iron, njl. iindawo zerabha zeelastomer kunye neempompo.